တော့တင်ဟမ်တို့ ဆီမီးဖိုင်နယ် တက်ရောက်သွားတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေ တောက်ပ နိုင်ခဲ့ကြသလဲ ? - Real Gaming Myanmar
တော့တင်ဟမ်တို့ ဆီမီးဖိုင်နယ် တက်ရောက်သွားတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေ တောက်ပ နိုင်ခဲ့ကြသလဲ ?
By Realman /4months ago / sport News / No Comments
ဒီနေ့ နံနက် ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတား ဖိုင်နယ် ဒုတိယ အကျော့ ပွဲစဉ် ကို အီတီဟတ် ကွင်းထဲ ကစား ခဲ့ ကြပြီး မန်စီးတီး တို့4–3ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အနိုင်ယူ သွားနိုင် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ပ – အကျော့ တုန်းက စပါးတို့ အိမ်ကွင်း မှာ 1 –0ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အနိုင် ရယူ နိုင်ခဲ့ တာကြောင့် နှစ်ကျော့ ပေါင်း4–4ဆိုတဲ့ ရလဒ် ၊ အဝေး ဂိုး စည်းမျဉ်း နဲ့ အတူ လန်ဒန် သားတို့ ဆီမီး ဖိုင်နယ် အဆင့် ကို တက်ရောက် သွားနိုင်ခဲ့ ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပထမ ပိုင်း မှာတော့ နှစ်ဖက် အသင်း ရဲ့ အဓိက ကစားသမား တွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ စတာလင်း ၊ ဆွန်ဟောင်မင်း တို့ တစ်ဦး2ဂိုး စီ သွင်းယူ ထားနိုင် ခဲ့ပြီး ဘာနာဒို က တစ်ဂိုး သွင်းယူ နုိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် မန်စီးတီး တို့3–2နဲ့ ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့ ကြ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ နောက် ပွဲချိန် 59 မိနစ် မှာ အဂူရို ဟာ အပြင်းစား ကန်ချက် နဲ့ ဦးဆောင် ခွင့် ရယူ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ပွဲချိန် 73 မိနစ် က ထောင့်ကန် ဘောမှ တစ်ဆင့် ရရှိ လာ ခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ကို လော်ရန်တေး က ဂိုးပိုက် နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ အဆိုပါ သွင်းဂိုး ဟာ လက်ထိ ဘောလို့ ယူဆ ခံခဲ့ ရတာ မို့ VAR ရဲ့ အဆုံးအဖြတ် ကို ခံယူ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
နောက်ဆုံး တော့ အဆိုပါ ဘောလုံး ဟာ လက်ထိ ခဲ့တာ မဟုတ် တဲ့ အတွက် ဂိုး ဖြစ်သွား ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ နောက် စတာလင်း ဟာ ပွဲချိန် 90+ မှာ အသင်း အတွက် ဟတ်ထရစ် ဂိုး သွင်းယူ ပေးသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ အဆိုပါ သွင်းဂိုး ကို VAR နဲ့ ပြန်လည် စစ်ဆေး ကြည့် လိုက်တဲ့ အချိန် မှာ ဘောလုံး ခင်းပေး ခဲ့သူ အဂူရို ဟာ လူကျွံ နေခဲ့ တာကြောင့် ဂိုး မဖြစ် ခဲ့ရ ပါဘူး ။
ထို့အတူ ပွဲစဉ် ဟာ4–3ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့သာ ပြီးဆုံး ခဲ့ရ ပြီး မန်စီတီး တို့ အနိုင် ရရှိ ပေမဲ့ ပြိုင်ပွဲ မှ လက်ပြ နှုတ်ဆက် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အခု တော့ တော့တင်ဟမ် ဟာ ဆီမီး ဖိုင်နယ် အဆင့် မှာ အေဂျက် အသင်း နဲ့ ကစား ရပါ တော့မယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှ နှစ်ဖက် အသင်း ကစားသမား တွေရဲ့ စွမ်းဆောင် ရည် တွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
အီဒါဆင် – 7
ဆွန်ရဲ့ သွင်းဂိုး တွေကို ဟန့်တား နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး နည်းပါ လွန်းခဲ့ ပါတယ် ။
ခံစစ် ကစား ပုံ ပျော့သွား ခဲ့တဲ့ အချိန် မှာ ကောင်းမွန် တဲ့ ဂိုးပေါက် ကာကွယ် မှု အချို့ လုပ်ပေး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဝေါ်လ်ကာ – 7
ဆွန်ကို နေရာ လွတ်တွေ ပိုင်ဆိုင် ခွင့် အရမ်း ပေးခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ထိရောက် တဲ့ တိုက်စစ် ဆင် ကစား မှုတွေ ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး ပြိုင်ဖက် ကို တိုက်စစ် ဆင်ခွင့် နည်းပါး အောင် ဖိအား ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ကွန်ပနီ – 8
မာကျော လှတဲ့ ခံစစ် ကစား ပုံနဲ့ အတူ ပွဲကြီး ပွဲကောင်း တွေမှာ အသင်း အတွက် အားထား ရတဲ့ ကစားသမား မျိုး ဖြစ်ကြောင်း ပြသ ထားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
လာပေါ်တေး – 5
သူ့ရဲ့ အမှားတွေ က တော့တင်ဟမ် ကို အစောပိုင်း သွင်းဂိုး2ဂိုး ရရှိ သွား စေခဲ့ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး ရဲ့ လာဘ် ကောင် ဖြစ်ခဲ့ သူ အတွက် တော့ ဒါဟာ စိတ်ပျက် ဖွယ် ည တစ်ခု ပါပဲ ။
မန်ဒီ – 7
ဒဏ်ရာ ပြသနာ တွေက ပြန်လာ ခဲ့တဲ့ မန်ဒီ ဟာ တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် စွာ တိုက်စစ် ဆင် ကစား ပေး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ခံစစ် ပိုင်းမှာ တော့ အထူး ကောင်းမွန် ခြင်း မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။
ဂန်ဒိုဂမ် – 7
ဘောလုံး ကိုင် ကစား ရာမှာ ဥာဏ်ကောင်း ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ဖာနန်ဒင်ဟို လိုတော့ အသင်း ရဲ့ ခံစစ် ပိုင်းကို လုံခြုံ မှုတွေ မပေး နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။
D ဆေးလ်ဗာ – 6
ပထမ ပိုင်း အတွင်း တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် တဲ့ ဖရီးကစ် တစ်ကြိမ် ကန်ခဲ့ ပေမဲ့ ဂိုးဘား ပေါ်မှ ကျော်တက် သွားခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ပွဲစဉ် အပေါ် ယခင် တုန်းက လောက် လွှမ်းမိုး နိုင်ခြင်း မရှိ ခဲ့တဲ့ အတွက် လူစား လဲခံ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒီဘရိုင်း –9( MOTM )
ပွဲစဉ် ရဲ့ အတောက်ပ ဆုံး ကစားသမား ပါပဲ ။
သူ့ရဲ့ လုပ်အား ၊ ကစား အား ၊ ဘောလုံး အမြင် ရှိ ခဲ့မှု ၊ ဂိုး ဖန်တီး မှု ဟတ်ထရစ် တွေက သူ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း ငြင်းစရာ မရှိ ခဲ့ရ ပါဘူး ။
B ဆေးလ်ဗား – 8
လုပ်အား ကောင်းမွန် မှုနဲ့ အတူ အသင်း အတွက် တစ်ဂိုး သွင်းယူ ပေးနိုင် ခဲ့ သလို ဒီဘရိုင်း ပိုမို အဆင်ပြေ စွာ ၊ လွတ်လပ်စွာ ကစား နိုင်ဖို့ အတွက် အထောက်အပံ့ ကောင်းတွေ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
အဂူရို – 8
အသင်းဖော် အတွက် ဂိုး ဖန်တီး ပေးနိုင် ခဲ့ သလို အနိုင် ရရှိ စေနိုင် ဖို့ နီးစပ် ခဲ့တဲ့ စတုတ္ထ ဂိုး ကိုလည်း သွင်းယူ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
စတာလင်း – 8
အသင်း အတွက် ခွန်အား ဖြစ်စေ တဲ့ ဂိုးတွေ သွင်းယူ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုး တွေ ကတော့ တစ်ကယ့် ကို သေသပ် ကောင်းမွန် ခဲ့ ပါတယ် ။
လူစားဝင် ကစားသမား …
ဖာနန်ဒင်ဟို – 6
တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး
လိုရစ် – 6
ပထမပိုင်း သွင်းဂိုး တွေကို တားဆီး နိုင်ဖို့ အခွင့် အရေး နည်းပါး ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီဘရိုင်း ရဲ့ ကန်ချက် ကို ဟန့်တား နိုင်ခဲ့ သလို ကောင်းမွန် တဲ့ ဂိုးပေါက် ကာကွယ် မှုတွေ လည်း လုပ်ပြ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ထရစ်ပီးယား – 5
စတာလင်း ကို ထန်းချုပ် နိုင်ဖို့ ရုန်းကန် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
စတာလင်း ရဲ့ ဒုတိယ ဂိုး မှာလည်း သူဟာ ပြိုင်ဖက် ရဲ့ နောက်မှ ကျန်ရစ် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အက်ဒါဝီရယ် – 5
စတာလင်း ရဲ့ အဖွင့် ဂိုး အတွက် အမှား မကင်း ခဲ့ ပါဘူး ။
ပြိုင်ဖက် ကစားသမား တွေ အတော် လေး တိုက်စစ် ဆင် ကစား နိုင်ခဲ့ ကြတဲ့ အထိ သူ့ရဲ့ ကစား ပုံ လျော့တိ လျော့ရဲ ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဗာတွန်ဂမ် – 6
တော့တင်ဟမ် ရဲ့ ခံစစ် မှာတော့ အတော် လေး ခြေစွမ်း ပြနိုင် ခဲ့သူ ပါပဲ ။
ဒါပေမဲ့ အဂူရို ရဲ့ ဂိုးကို မဟန့်တား နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။
ရို့စ် – 5
သူ့ရဲ့ တောင်ပံ တစ်လျောက် ဘာနာဒို ဟာ စိတ်ကြိုက် မွှေနှောက် ကစား ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီပွဲ ကို သူ မေ့ပျောက် လိုက်တာ ပိုကောင်း ပါ လိမ့်မယ် ။
ဆစ်ဆိုကို – 6
ဒဏ်ရာ မရခင် အထိ တော့ အသင်း အတွက် အကောင်းဆုံး ကစား ပေးနိုင် ခဲ့ သလို ဒီဘရိုင်း ကိုလည်း ကစား ရ ခက်ခဲ အောင် လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဝမ်ယာမာ – 6
မန်စီးတီး ရဲ့ ဘောလုံး ချိတ်ဆက် ကစား မှုကို အတော်အတန် ဖြတ်တောင် နိုင်ခဲ့ ပြီး ကွင်းလယ် တစ်လျောက် ကစား အား အရမ်း ကို ကောင်းမွန် ခဲ့ ပါတယ် ။
အလီ – 6
အသင်း ရဲ့ ပထမ ဂိုး ရရှိ စေဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင် ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဒုတိယ ဂိုး အတွက် ဆွန်ဟောင်မင်း နေရာ လွတ် ရရှိ ဖို့လည်း လုပ်ဆောင် ပေးသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
အဲရစ်ဆင် – 6
ဆွန်ရဲ့ ဒုတိယ ဂိုးကို ဖန်တီး ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ကစား အား ကောင်းမွန် ခဲ့ ပေမဲ့ ပွဲစဉ် အပေါ် ယခင် တုန်းက လောက် လွှမ်းမိုး နိုင်မှု တော့ မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။
မော်ရာ – 7
တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် တဲ့ ရွေ့လျား မှု ၊ တိုက်စစ် ပုံဖော် ပေးနိုင် မှု တွေနဲ့ အတူ တော့တင်ဟမ် ရဲ့ ပထမဆုံး သွင်းဂိုး2ဂိုး လုံးမှာ အရေး ပါသူ ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဆွန်ဟောင်မင်း – 7
မန်စီးတီး တို့ရဲ့ အစောပိုင်း ခံစစ် အမှား တွေကို နာကျင် ခံစား စေမှု အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
သူဟာ ဒီည တော့တင်ဟမ် ရဲ့ စူပါ ဟီးရိုး ဖြစ်ခဲ့ ရပြန် ပါတယ် ။
လော်ရန်တေး – 6
တော့တငျဟမျတို့ ဆီမီးဖိုငျနယျ တကျရောကျသှားတဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျမှာ ဘယျသူတှေ တောကျပ နိုငျခဲ့ကွသလဲ ?
ဒီနေ့ နံနကျ ခနျြပီယံလိဂျ ကှာတား ဖိုငျနယျ ဒုတိယ အကြော့ ပှဲစဉျ ကို အီတီဟတျ ကှငျးထဲ ကစား ခဲ့ ကွပွီး မနျစီးတီး တို့4–3ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ အနိုငျယူ သှားနိုငျ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
ဒါပမေဲ့ ပ – အကြော့ တုနျးက စပါးတို့ အိမျကှငျး မှာ 1 –0ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ အနိုငျ ရယူ နိုငျခဲ့ တာကွောငျ့ နှဈကြော့ ပေါငျး4–4ဆိုတဲ့ ရလဒျ ၊ အဝေး ဂိုး စညျးမဉျြး နဲ့ အတူ လနျဒနျ သားတို့ ဆီမီး ဖိုငျနယျ အဆငျ့ ကို တကျရောကျ သှားနိုငျခဲ့ ကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ပထမ ပိုငျး မှာတော့ နှဈဖကျ အသငျး ရဲ့ အဓိက ကစားသမား တှေ ဖွဈကွ တဲ့ စတာလငျး ၊ ဆှနျဟောငျမငျး တို့ တဈဦး2ဂိုး စီ သှငျးယူ ထားနိုငျ ခဲ့ပွီး ဘာနာဒို က တဈဂိုး သှငျးယူ နိုငျခဲ့တဲ့ အတှကျ မနျစီးတီး တို့3–2နဲ့ ဦးဆောငျ နိုငျခဲ့ ကွ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီ နောကျ ပှဲခြိနျ 59 မိနဈ မှာ အဂူရို ဟာ အပွငျးစား ကနျခကျြ နဲ့ ဦးဆောငျ ခှငျ့ ရယူ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေဲ့ ပှဲခြိနျ 73 မိနဈ က ထောငျ့ကနျ ဘောမှ တဈဆငျ့ ရရှိ လာ ခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ကို လျောရနျတေး က ဂိုးပိုကျ နဲ့ မိတျဆကျ ပေးသှား ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေဲ့ အဆိုပါ သှငျးဂိုး ဟာ လကျထိ ဘောလို့ ယူဆ ခံခဲ့ ရတာ မို့ VAR ရဲ့ အဆုံးအဖွတျ ကို ခံယူ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
နောကျဆုံး တော့ အဆိုပါ ဘောလုံး ဟာ လကျထိ ခဲ့တာ မဟုတျ တဲ့ အတှကျ ဂိုး ဖွဈသှား ခဲ့ရ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီ နောကျ စတာလငျး ဟာ ပှဲခြိနျ 90+ မှာ အသငျး အတှကျ ဟတျထရဈ ဂိုး သှငျးယူ ပေးသှား ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေဲ့ အဆိုပါ သှငျးဂိုး ကို VAR နဲ့ ပွနျလညျ စဈဆေး ကွညျ့ လိုကျတဲ့ အခြိနျ မှာ ဘောလုံး ခငျးပေး ခဲ့သူ အဂူရို ဟာ လူကြှံ နခေဲ့ တာကွောငျ့ ဂိုး မဖွဈ ခဲ့ရ ပါဘူး ။
ထို့အတူ ပှဲစဉျ ဟာ4–3ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့သာ ပွီးဆုံး ခဲ့ရ ပွီး မနျစီတီး တို့ အနိုငျ ရရှိ ပမေဲ့ ပွိုငျပှဲ မှ လကျပွ နှုတျဆကျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
အခု တော့ တော့တငျဟမျ ဟာ ဆီမီး ဖိုငျနယျ အဆငျ့ မှာ အဂေကျြ အသငျး နဲ့ ကစား ရပါ တော့မယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှ နှဈဖကျ အသငျး ကစားသမား တှရေဲ့ စှမျးဆောငျ ရညျ တှကေို ဖျောပွ ပေးလိုကျ ပါတယျ ။
အီဒါဆငျ – 7
ဆှနျရဲ့ သှငျးဂိုး တှကေို ဟနျ့တား နိုငျဖို့ အခှငျ့အရေး နညျးပါ လှနျးခဲ့ ပါတယျ ။
ခံစဈ ကစား ပုံ ပြော့သှား ခဲ့တဲ့ အခြိနျ မှာ ကောငျးမှနျ တဲ့ ဂိုးပေါကျ ကာကှယျ မှု အခြို့ လုပျပေး နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
ဝျေါလျကာ – 7
ဆှနျကို နရော လှတျတှေ ပိုငျဆိုငျ ခှငျ့ အရမျး ပေးခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေဲ့ ထိရောကျ တဲ့ တိုကျစဈ ဆငျ ကစား မှုတှေ ပွုလုပျ ခဲ့ပွီး ပွိုငျဖကျ ကို တိုကျစဈ ဆငျခှငျ့ နညျးပါး အောငျ ဖိအား ပေးနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ကှနျပနီ – 8
မာကြော လှတဲ့ ခံစဈ ကစား ပုံနဲ့ အတူ ပှဲကွီး ပှဲကောငျး တှမှော အသငျး အတှကျ အားထား ရတဲ့ ကစားသမား မြိုး ဖွဈကွောငျး ပွသ ထားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
လာပျေါတေး – 5
သူ့ရဲ့ အမှားတှေ က တော့တငျဟမျ ကို အစောပိုငျး သှငျးဂိုး2ဂိုး ရရှိ သှား စခေဲ့ ပါတယျ ။
မနျစီးတီး ရဲ့ လာဘျ ကောငျ ဖွဈခဲ့ သူ အတှကျ တော့ ဒါဟာ စိတျပကျြ ဖှယျ ည တဈခု ပါပဲ ။
မနျဒီ – 7
ဒဏျရာ ပွသနာ တှကေ ပွနျလာ ခဲ့တဲ့ မနျဒီ ဟာ တဈကယျ့ ကို ကောငျးမှနျ စှာ တိုကျစဈ ဆငျ ကစား ပေး နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေဲ့ ခံစဈ ပိုငျးမှာ တော့ အထူး ကောငျးမှနျ ခွငျး မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။
ဂနျဒိုဂမျ – 7
ဘောလုံး ကိုငျ ကစား ရာမှာ ဉာဏျကောငျး ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေဲ့ ဖာနနျဒငျဟို လိုတော့ အသငျး ရဲ့ ခံစဈ ပိုငျးကို လုံခွုံ မှုတှေ မပေး နိုငျခဲ့ ပါဘူး ။
D ဆေးလျဗာ – 6
ပထမ ပိုငျး အတှငျး တဈကယျ့ ကို ကောငျးမှနျ တဲ့ ဖရီးကဈ တဈကွိမျ ကနျခဲ့ ပမေဲ့ ဂိုးဘား ပျေါမှ ကြျောတကျ သှားခဲ့ ရ ပါတယျ ။
ပှဲစဉျ အပျေါ ယခငျ တုနျးက လောကျ လှမျးမိုး နိုငျခွငျး မရှိ ခဲ့တဲ့ အတှကျ လူစား လဲခံ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
ဒီဘရိုငျး –9( MOTM )
ပှဲစဉျ ရဲ့ အတောကျပ ဆုံး ကစားသမား ပါပဲ ။
သူ့ရဲ့ လုပျအား ၊ ကစား အား ၊ ဘောလုံး အမွငျ ရှိ ခဲ့မှု ၊ ဂိုး ဖနျတီး မှု ဟတျထရဈ တှကေ သူ အကောငျးဆုံး ဖွဈခဲ့ ကွောငျး ငွငျးစရာ မရှိ ခဲ့ရ ပါဘူး ။
B ဆေးလျဗား – 8
လုပျအား ကောငျးမှနျ မှုနဲ့ အတူ အသငျး အတှကျ တဈဂိုး သှငျးယူ ပေးနိုငျ ခဲ့ သလို ဒီဘရိုငျး ပိုမို အဆငျပွေ စှာ ၊ လှတျလပျစှာ ကစား နိုငျဖို့ အတှကျ အထောကျအပံ့ ကောငျးတှေ ပေးနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
အသငျးဖျော အတှကျ ဂိုး ဖနျတီး ပေးနိုငျ ခဲ့ သလို အနိုငျ ရရှိ စနေိုငျ ဖို့ နီးစပျ ခဲ့တဲ့ စတုတ်ထ ဂိုး ကိုလညျး သှငျးယူ ပေးနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
စတာလငျး – 8
အသငျး အတှကျ ခှနျအား ဖွဈစေ တဲ့ ဂိုးတှေ သှငျးယူ ပေးနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုး တှေ ကတော့ တဈကယျ့ ကို သသေပျ ကောငျးမှနျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဖာနနျဒငျဟို – 6
လိုရဈ – 6
ပထမပိုငျး သှငျးဂိုး တှကေို တားဆီး နိုငျဖို့ အခှငျ့ အရေး နညျးပါး ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီဘရိုငျး ရဲ့ ကနျခကျြ ကို ဟနျ့တား နိုငျခဲ့ သလို ကောငျးမှနျ တဲ့ ဂိုးပေါကျ ကာကှယျ မှုတှေ လညျး လုပျပွ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
ထရဈပီးယား – 5
စတာလငျး ကို ထနျးခြုပျ နိုငျဖို့ ရုနျးကနျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
စတာလငျး ရဲ့ ဒုတိယ ဂိုး မှာလညျး သူဟာ ပွိုငျဖကျ ရဲ့ နောကျမှ ကနျြရဈ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
အကျဒါဝီရယျ – 5
စတာလငျး ရဲ့ အဖှငျ့ ဂိုး အတှကျ အမှား မကငျး ခဲ့ ပါဘူး ။
ပွိုငျဖကျ ကစားသမား တှေ အတျော လေး တိုကျစဈ ဆငျ ကစား နိုငျခဲ့ ကွတဲ့ အထိ သူ့ရဲ့ ကစား ပုံ လြော့တိ လြော့ရဲ ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။
ဗာတှနျဂမျ – 6
တော့တငျဟမျ ရဲ့ ခံစဈ မှာတော့ အတျော လေး ခွစှေမျး ပွနိုငျ ခဲ့သူ ပါပဲ ။
ဒါပမေဲ့ အဂူရို ရဲ့ ဂိုးကို မဟနျ့တား နိုငျခဲ့ ပါဘူး ။
ရို့ဈ – 5
သူ့ရဲ့ တောငျပံ တဈလြောကျ ဘာနာဒို ဟာ စိတျကွိုကျ မှနှေောကျ ကစား ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီပှဲ ကို သူ မပြေ့ောကျ လိုကျတာ ပိုကောငျး ပါ လိမျ့မယျ ။
ဆဈဆိုကို – 6
ဒဏျရာ မရခငျ အထိ တော့ အသငျး အတှကျ အကောငျးဆုံး ကစား ပေးနိုငျ ခဲ့ သလို ဒီဘရိုငျး ကိုလညျး ကစား ရ ခကျခဲ အောငျ လုပျဆောငျ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
ဝမျယာမာ – 6
မနျစီးတီး ရဲ့ ဘောလုံး ခြိတျဆကျ ကစား မှုကို အတျောအတနျ ဖွတျတောငျ နိုငျခဲ့ ပွီး ကှငျးလယျ တဈလြောကျ ကစား အား အရမျး ကို ကောငျးမှနျ ခဲ့ ပါတယျ ။
အသငျး ရဲ့ ပထမ ဂိုး ရရှိ စဖေို့ အတှကျ လုပျဆောငျ ပေးနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ ဒုတိယ ဂိုး အတှကျ ဆှနျဟောငျမငျး နရော လှတျ ရရှိ ဖို့လညျး လုပျဆောငျ ပေးသှား ခဲ့ ပါတယျ ။
အဲရဈဆငျ – 6
ဆှနျရဲ့ ဒုတိယ ဂိုးကို ဖနျတီး ပေးနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ကစား အား ကောငျးမှနျ ခဲ့ ပမေဲ့ ပှဲစဉျ အပျေါ ယခငျ တုနျးက လောကျ လှမျးမိုး နိုငျမှု တော့ မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။
မျောရာ – 7
တဈကယျ့ ကို ကောငျးမှနျ တဲ့ ရှလြေ့ား မှု ၊ တိုကျစဈ ပုံဖျော ပေးနိုငျ မှု တှနေဲ့ အတူ တော့တငျဟမျ ရဲ့ ပထမဆုံး သှငျးဂိုး2ဂိုး လုံးမှာ အရေး ပါသူ ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။
ဆှနျဟောငျမငျး – 7
မနျစီးတီး တို့ရဲ့ အစောပိုငျး ခံစဈ အမှား တှကေို နာကငျြ ခံစား စမှေု အဖွဈ ပွောငျးလဲ ပေးနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
သူဟာ ဒီည တော့တငျဟမျ ရဲ့ စူပါ ဟီးရိုး ဖွဈခဲ့ ရပွနျ ပါတယျ ။
လျောရနျတေး – 6
Previous: နွေရာသီရောက်ပြီဆိုတော့ အုန်းစိမ်းရည် သောက်ပါ….
Next: ရွာတွေမှာ ရွံစရာ အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းက ဘုန်းကြီးတွေက ရွာကိုအနိုင်ကျင့်တာဘဲတဲ့(ရွာပြန် , ကျောင်းထိုင်မယ့် ဘုန်းကြီးကို ဆရာဘုန်းကြီးက သြဝါဒပေးနေတာပါ)